New Acute Treatment for Migraine | Wire News
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Acute Kurapa kweMigraine
Iyo yakakura-yakaongororwa nevezera chaiyo-yepasirese kudzidza kweiyo migraine mudziyo inoratidza kuti kure magetsi neuromodulation (REN) inopa yakachengeteka uye inoshanda isina zvinodhaka-isina acute kurapwa sarudzo kune vane migraine vanorwara.
Theranica, kambani yakatemerwa yedhijitari yekurapa inogadzira maelectroceuticals epamusoro emigraine uye mamwe mamiriro ekurwadziwa, yakazivisa nhasi kuburitswa kwechidzidzo chitsva chakaongororwa nevezera kuongorora kushanda, kuchengetedzwa uye kusimba kweremoteelectric neuromodulation (REN) seyakamira, uye mubatanidzwa wemishonga, kurapwa kwemigraine. Iyo chaiyo-yepasirese humbowo kudzidza yakaburitswa muFrontiers muPain Research Journal inogumisa kuti REN, inotungamirwa neTheranica's flagship chigadzirwa Nerivio®, inoita zvakanaka pamativi ese matatu.
Migumisiro kubva pakuongororwa kwemishonga inopfuura 23,000, yakaunganidzwa mukati memwedzi ye19, yakaratidza kushanda kwakakosha kweREN. Mu66.5% yekurapa, REN yakashandiswa seyakamira yega. Mukati me80% yekurapa, hapana mimwe mishonga yakatemwa yakashandiswa. Kunze kwevarwere ve2,514 vakabatanidzwa muhutano hwekuongorora, 32% yevarwere vane episodic migraine uye 21% yevarwere vasingaperi vane migraine, vakawana kusununguka kwemaawa maviri mushure mekurapwa mune zvakawanda zvekurapa kwavo, uye pamusoro pe65% vakawana marwadzo asingagumi mushure memaawa maviri. . Mukuongorora kwekuchengetedza, makumi mashanu nepfumbamwe chete evatori vechikamu 59 (12,368%) vakashuma chero zviitiko zvakashata zvine chekuita nemudziyo, mazhinji acho aive akapfava (0.48) asina mishumo yezviitiko zvakakomba.
Yakapfekwa pamusoro peruoko rwepamusoro pakutanga kwekurwiswa kwemigraine, Nerivio inoderedza migraine musoro uye zviratidzo zvinosanganiswa nekushandisa REN kukonzeresa endogenous analgesic mechanism, inozivikanwa se conditioned pain modulation (CPM). Chigadzirwa chacho chinotungamirirwa ne-smartphone app, zvichibvumira varwere kuti vagadzirise kusimba kwekurapa kwavo pamwe nekuchengetedza yakagadzirwa-in migraine diary iyo inogona kugoverwa nyore nyore nevarapi kuti vavandudze migraine kutevera uye kutarisira.
Nerivio yakanyorwa, yakabatana nedigital inopfekwa. Zvidzidzo zvekiriniki zvakaratidza kuti Nerivio inoshanda uye yakachengeteka pakurapa episodic uye isingaperi migraine muvanhu vane makore gumi nemaviri uye kupfuura.